Soosaarayaasha Soo Saarayaasha & Shirkadaha Quudinta | Shiinaha Warshadda Quudinta
Qalabka Kala-bixinta eeyaha
1.Dheshed Tool for Dogs with ahama steel steel wuxuu gaaraa maqaarka kore si uu si badbaado leh oo sahal ah uga saaro timaha dabacsan iyo undercoat.it sidoo kale wuxuu si wax ku ool ah u shanleyn karaa dhogorta qoto dheer wuxuuna kobcin karaa wareegga dhiigga maqaarka.
Qalabka aaladda loo adeegsado eeyaha ayaa leh daab bir birta ah oo qaloocsan, Waxay ku habboon tahay khadadka jidhka xayawaanka in xayawaankaaga xiisaha lihi ay aad uga helayaan habka qurxinta, ku habboon bisadaha iyo eeyaha iyo xayawaannada kale ee leh timo gaaban ama dheer.
3.Qalabkan rabitaanka eeyaha ee leh badhanka sii deynta yar, hal guji oo kaliya si aad u nadiifiso ugana saarto 95% timaha ilkaha, waqtigaaga badbaadi inaad nadiifiso shanlada.
Ey daadinta Badeecada Nalalka
1.Orkeena daadinta burushka daabku wuxuu leeyahay daab la isku hagaajin karo oo laxiro oo leh gacan qabasho oo loo kala saari karo si loo abuuro ilaa 14 inch oo ah dherer daadis dhaadheer ah taas oo ka dhigaysa mid dhakhso badan oo sahlan.
2. Eygan daadinta burushka daabku wuxuu si badbaado leh & si deg deg ah u tirtirayaa timaha xayawaanka dabacsan si loo yareeyo daadinta. Waad ku qurxin kartaa xayawaankaaga guriga.
3.Waxaa jira qufulo gacanta ku haya, waxay hubisaa in daabku uusan dhaqaajinayn inta la hagaajinayo
4. Eyga daadinta burushka daabku wuxuu yareeyaa daadinta ilaa 90% iyadoo kaliya hal daqiiqo oo ah 15 daqiiqo lagu qurxiyo usbuucii.
Caday Burush Dog Iyo Bisadda Qalabka
Burushka Ey Ey Yaanyo Kala Jeedo Burushku waa dhakhso, fududahay iyo hab dhakhso leh oo looga saaro oo loo yareeyo jaakada xayawaankaaga dhexdeeda daqiiqado gudahood.
Burushkan Aaladda Dog Iyo Bisad Daahfurka waxaa loo isticmaali karaa eyga ama bisadaha, yar ama weyn. Burushkayaga Eyga iyo Bisadda Qalabka Cunitaanka wuxuu yareynayaa daadinta illaa 90% waxayna ka saareysaa timaha isku dhafan iyo kuwa qallalan iyada oo aan la jiidin walaac.
Qalabkan Ey Jeedinta iyo Bisaduhu waxay cadaydaa timo dabacsan, wasakh iyo qashin ka soo baxa jaakada xayawaankaaga oo ka dhigaysa mid dhalaalaysa oo caafimaad qabta!
Qalabka Xakamaynta Rake ee Dharka Yar
Qalabkan dharka lagu gashado dharka hoosta xayawaanku waa burush heer sare ah, yareeya bucshiradda, daadinta, timaha isku dhafan iyo khatarta timaha xayawaanka ee caafimaadka leh.Waxay si tartiib ah u duugi kartaa maqaarka xasaasiga ah maadaama aad si ammaan ah uga saareyso dermaha iyo dharka hoose.
Qalabka deminta xayawaanka hoosta ku jira ayaa baabi'iya timaha xad-dhaafka ah, maqaarka dhintay ee xanniban, iyo buskudka xayawaanku wuxuu kaa caawin karaa yareynta xasaasiyadda xilliyada iyo hindhisada milkiilayaasha caafimaadka xoolaha leh.
Qalabkan dharka lagu gashado ee dharka hoosta lagu raaco oo leh siibid la'aan, fudayd qabasho fudud, rakeena diyaarinta ahi waa mid aan xoqin maqaarka xayawaanka iyo jaakadaha mana jajabin doono curcurkaaga ama dhudhunkaaga.
Burushka Burushka Eeyaha
1.Salalka dabacsan ee burushkan duugista ah eeyga si wax ku ool ah wax uga qabta sariiraha madax adag, dhaldhalaalka, iyo bursooyinka iyaga oo aan jiidan. wuxuu ka tagayaa jubbadda sare ee xayawaankaaga oo siman oo aan dhaawacmin, wuxuuna yareynayaa daadinta illaa 90%.
Waa qalab aad u fiican oo lagu kala furfuro meelaha adag ee dhogorta, sida dhagaha gadaashiisa iyo kilkilaha.
3.Buraashkan loo yaqaan 'dematting' eeygu wuxuu leeyahay warqad ka hortag ah, sifiican u qabashada waxay hubisaa amaan iyo raaxo leh markaad xanaaneynayso xayawaankaaga.